Ni3sung Phone lineasiat thei ruangah SAC ralhraang inamilai pawl Ralrin pe - Falam Online Media
Ni3sung Phone lineasiat thei ruangah SAC ralhraang inamilai pawl Ralrin pe
Thaisun, February 21 ihsin thok, nithum sung cu rampi emergency dinhmun ah phuangin, ziangtiklai khalah phone lineasiat thei ruangah biakpawhnak ceet thilri pawl ralring cia dingin SAC ralhraang in rampumhuap palikzung pawl ah caakuat tiah theihasi.
Sunglam ihsinapuut darh tiih tarlangmi cuih cakuat ahcun Palikzung zaten cuih tikcucaan sungah Naypidaw palikzungpi phone theih ringring dingin phone pangaiasi lomi biakpawhnak ceet hmangin report pek dingin siseh, Palikbawi pawl in tlunlam caan khiah sak mi tikcucaan khelh tengteng ah Naypidaw ah report pek dingin cakuat ah an ngan tel.
တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ ပြတ်တောက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့အတွက် ကြားခံ ဆက်သွယ်ရေး စက်များ အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ရဲစခန်းများကို ညွှန်ကြား
အခုလာမယ့် ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃ ရက်တို့ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက အရေးပေါ်ကာလသတ်မှတ်ပြီး အဲ့ရက်တွေမှာ ဖုန်းလိုင်းတွေ အချိန်မရွေး ပြတ်တောက်ဖို့ ရှိတဲ့အတွက် တယ်လီဖုန်းအစား ကြားခံဆက်သွယ်ရေးစက်တွေကို အဆင်သင့် အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားရှိဖို့ နယ်မြေဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ ရဲစခန်းတွေကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက စာပေးပို့ ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ထဲမှာ နယ်မြေဒေသ အသီးသီးက ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ နရခ( နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်)နဲ့ အရေးပေါ်ကာလမှာ အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့ အတွက် ဖုန်းမဟုတ်တဲ့ အခြား ကြားခံဆက်သွယ်ရေး စက်တွေကို အသုံးပြုဖို့နဲ့ အဲ့ဒီရက်တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ စခန်းမှူးတွေက နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်ကို သတ်မှတ်ချိန်ရောက်တိုင်း သတင်းပေးပို့ရမယ်လို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
အဲ့ဒီ သတင်းပေးပို့ တဲ့ အသံဖိုင်၊ အသုံးပြုသူကိုလည်း ခရိုင်မှူး၊ ဒုခရိုင်မှူး တွေက အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
အခုညွှန်ကြားချက်ဟာ လာမယ့် ၂၂.၂.၂၀၂၂ ရက်နေ့ကို ၂ ခြောက်လုံးနေ့သတ်မှတ်ထားပြီး အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာစည်းရုံးနေတာတွေ တွေ့တဲ့အတွက် အကြမ်းဖက်စကစ အနေနဲ့ ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း သတင်းပေးပို့သူက ပြောပါတယ်။
SAC ralhraang in ni3sung (February 21-23) rampi emergencyaphuang nak san cu 22-02-2022 (2 ခြောက်လုံး) ni thawn dengaw in ramsung cangvaihnak nei dingin online ah sawm thanawknakaum ruangahasi tiah Ralhraang sungthu pholangtu “Hram” pakhat cun DV hnen ahasim.
Cuih ni3sungah sunnihlawh phone line an phit tum maw, phit tumlo timi cu thufelfai theihasi lo.
← 74-nak Chin Phunpi Ni Thusuah – CNO/CNDF
Meithal thlak pangin mah le mah kap aw ngahtu Palikbawiathi →
SAC ralhraang in Chin mino2an kap that